सहारा र कथा नेपालबीच सम्झौता
सुदर्शन रञ्जित Feb 23, 2021 09:14
पोखरा । प्रतिष्ठित आहा ! रारा गोल्डकप फुटवल प्रतियोगिताको १९औँ संस्करणको अडियो भिडियो अधिकारका लागि कथा नेपाल प्रा.लि. र आयोजक सहारा क्लब पोखरा बीच सम्झौता भएको छ । दुबै पक्षले एक कार्यक्रमका बीच सोमबार एक वर्षका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सम्झौतापत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहारा क्लबको तर्फबाट अध्यक्ष केशवबहादुर थापा र कथा नेपाल प्रा.लि.को तर्फबाट मनोजराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो सम्झौतासँगै कथा नेपाल प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित देखापढी डटकमले उक्त प्रतियोगिताको प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने भएको हो ।
स्मरण रहोस, सहारा क्लब पोखराले वार्षिक रुपमा आयोजना गर्दै आइरहेको मोफसल कै यो प्रतिष्ठित प्रतियोगिता यस बर्ष आउँदो चैत १७ गतेदेखि २८ गतेसम्म सञ्चालन हुँदैछ । जसमा विदेशी टिमसहित ‘ए’ डिभिजन क्लब, मोफसलका क्लब र आयोजक सहारा क्लब पोखराले प्रतिस्पर्धा गर्ने आयोजकले जनाएको छ ।
गत बर्ष प्रतियोगिताको उपाधि मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबले जितेको थियो । मनाङले फाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई हराउँदै उपाधिमाथि कब्जा जमाएको थियो । सहारा क्लबले प्रतियोगिता आयोजना गरेर बचत भएको रकम क्लबकै रेखदेखमा सञ्चालित सहारा उकेडेमीमा खर्च हुँदै आएको छ ।
Previous सागका पदकधारी खेलाडीद्धारा सहारा एकेडेमीको अवलोकन
Next पोखरामा देश्ना चन्द स्मृति भेट्रान्स फुटबल सुरु, उद्घाटन खेलमा आयोजक विजयी
दशौँ बगर भाइखलक फुटबल प्रतियोगितामा २८ टिम (खेलतालिकासहित)
दशौँ बगर भाइखलक फुटबल प्रतियोगितामा २८ टिमको सहभागिता रहने
लुम्बिनी विकास बैंकद्धारा सहारालाई आर्थिक सहयोग
पोखरामा प्रथम राजन खुला फुटसल प्रतियोगिता हुने
चौथो विरेन स्मृति, १४औं बि.टी कप’ सुरु